प्रेम आले सहित तीनजना मन्त्री फिर्ता, को को बन्दैछन् नयाँ मन्त्री? - खवर संजाल
प्रेम आले सहित तीनजना मन्त्री फिर्ता, को को बन्दैछन् नयाँ मन्त्री?
- जेष्ठ २१, २०७८ मा प्रकाशित
खबर संजाल, २१ जेठ, काठमाण्डौ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारमा जाने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपा अध्यक्ष ठाकुरबीच आज दिउँसो बालुवाटारमा भएको छलफलपछि जसपा सरकारमा जान तयार भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री जसपाले पाउने सहमति भएको छ ।
वरिष्ठ नेता महतोसँगै शरदसिंह भण्डारी, अनिल झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, विमल श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी र एकबाल मिया मन्त्री बन्ने भएका छन् ।
महिला बालबालिकामन्त्री जुलीकुमारी महतो, वनमन्त्री प्रेम आले र भूमिव्यवस्थामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेको मन्त्रालय खोसिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपा नेताहरुबीच शुक्रबार भएको छलफलमा ८ मन्त्रालय टुंगिएको थियो। जसअनुसार जसपाले शहरी विकास, उर्जा, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, श्रम, युवा तथा खेलकुद, महिला बालबालिका र वन मन्त्रालय पाएको छ ।
मन्त्री पद खोसिएकाहरुले पुन; अन्य मन्त्रालय पाउछन् कि पाउँदैनन् टुंगो छैन।
भाइरल शिक्षिका र शैक्षिक सुधारको बाटो
केपिलासको सिङ्गो गाउँनै एमालेमा प्रबेश, कांग्रेस,माओबादी र जसपाको उड्यो होस
आयो अध्यादेश : २० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन पुग्ने
माधव पक्षका यी सांसद जसले देउवाको मन्त्री हुन ‘दाम्लो चुडाउन’ लागे
कुन राशि भएकाहरूको आजको दिन एकदमै शुभ? हेर्नुहोस आजको राशिफल
नेपाल पक्षबाट बाहिरिँदै खनाल समूह
निजी स्कूल र हस्पिटलमा लगानी गरेका श्रेष्ठलाई देउवा सरकारले बनायो स्वास्थ्य राज्यमन्त्री
दिल्लीका सुरक्षाकर्मी धमाधम काठमाण्डौमा
गाउँपालिका अध्यक्षको धम्की : अधिवेशनमा नसघाए जे पनि गर्न सक्छु
सर्वोच्चको आदेश : नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नु (पूर्णपाठ सहित )
ओली पार्टी मिलाउन खोज्ने, नेपाल दाहाललाई नछोड्ने
भारतमा लकडाउनमा काम नपाउँदा अभिनेत्री बने यौनकर्मी, प्रहरीद्वारा पक्राउ
भाइरसविरुद्ध लड्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कसरी बढाउने ? यस्ता छन् उपाय
आमा बनिन् रक्षा, सार्वजनिक गरिन् छोरी(तस्बिरहरू)
उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमले दियो एकल महिलालाई घर